Tetibolam-panjakana 2021 Tsy hitarazoka intsony ny fandaniana azy ?
Araka ny voafaritra ao amin` ny and. faha-75 ao anatin` ny lalámpanorenana dia “ny volana oktobra ny fotoam-pivoriana faharoa izay atokana indrindra amin` ny fandaniana lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana” eo anivon` ny parlemantera. Raha tsiahivina dia ny roa volana lasa no lany ny LFR 2020.
Orinasa Ambatovy Hiala ny Sherritt Kanadianina
Hiala tanteraka amin'ny fitrandrahana nikela sy kobalta ao anatin’Ambatovy ny Sherritt International rehefa niditra teo ambany fiarovan'ny lalàna amin'ny bankiropitra any Kanada.
Mpiasan’ny QMM RIO TINTO Nanampy ireo mponina manodidina ny toeram-pitrandrahana
Nahazo fanampiana tamin’ireo sendika ireo mponina ao Andrakaraka, Emanaka, Ampasy Nahampoana voakasik’ilay toerana fitrandrahana fasimainty tanterahin’ny orinasa QMM Rio Tinto any Tolagnaro.
Orinasa AAA Nitory eny amin’ny Filankevi-panjakana
Nametraka fitoriana teny amin’ny Filankevi-panjakana mitaky ny hanafoanana ny fanakatonana ny orinasa AAA ny mpisolovava sy ny mpitantana io orinasa io omaly.
Dany Rakotoson “Isatra ho an’ny fampandrosoana ny fifanandrinana politika”
Tsy dia nisy zava-baovao loatra ny zava-boalazan’ny filoham-pirenena omaly (TTF: Ny alahady teo), hoy ny mpandinika raharaham-pirenena sady mpandraharaha, Dany Rakotoson.
Thierry Raveloson “Mitongiana ny Fampandrosoana isam-paritra”
Araka ny nambaran` ny filoha Rajoelina ny alahady lasa teo dia ““mialohan` ny faran` ny taona ny fifidianana loholona ary hihena 18 no isan` izy ireo”.
Nivoitra nandritra ny fanofanana ny momba ny tambin-karama farany ambany sy ny fampiharana izany ary ny hetra tokony haloan’ny mpitantana amin’ny fanjakana. Vehivavy mpikambana manodidina ny 25 isa no tonga nanatrika ny fiofanana izay mitantana na mandraharaha amin’ny orinasa maro toy ny mpanao asa tanana, asa an-dranomasina, trano fandraisam-bahiny sy fisakafoana, taotrano, miasa momba ny hazo, ny teknolojia vaovao…. Tanjona tamin’ny fampiofanana ny hametrahana ny vehivavy mpandraharaha hahay hitantana tsara ny tetibolan’ny orinasa tantanany, mba tsy hahafaty antoka ny orinasa kanefa ihany koa tsy hanararaotra ny mpiasa, araka ny fanazavana nentin-dramatoa Mimosa Randrianantenaina, filoha lefitry ny fikambanam-behivavy mpandraharaha eto Analamanga. Omaly hariva moa dia nifarana ity atrikasa ity.